August 23, 2021 - Babal Khabar
Aug232021 by बबाल खबरNo Comments
को’रोना सं’क्रमणको कारण अाज मात्र यति धेरैले ज्या’न गुमाय !
अाजको को'रोना अपडेट अघि खबर प्रदेश १ को, प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा ४२१ जनामा को'रोना सं'क्रमण देखिएको छ । ९२४ जनाको पी'सीआर परी'क्षण गर्दा ३०९ र ५०२ जनाको एन्टि'जेन परी'क्षण गर्दा ११२ जनामा को'रोना सं'क्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर परीक्षणका आधारमा झापामा १४९, मोरङमा ६८, सु्नसरीमा ६७, इलाममा १२, संखुवासभामा ५ उदयपुरमा २, पाँचथर र तेह्रथुममा १–१ र प्रदेश १ बाहिरका ४ जनामा सं'क्रमण देखिएको हो । झापाको बिर्तामोडमा ३०, कनकाई र अर्जुनधारामा २६–२६, दमकमा १९, शिवसताक्षीमा १६, मेचीनगरमा १४, बुद्धशान्तिमा ८, भद्रपुरमा ४, कमल गाउँपालिकामा २, गौरादह, बाह्रदशी, गौरीगञ्ज र हल्दिबारीमा १–१, मोरङको बेलबारीमा २५, विराटनगरमा २३, सुन्दरहरैंचामा७, बुढीगंगा र पथरीशनिश्चरेमा ३–३, रंगेली र कानेपोखरीमा २–२, केराबारी, मिक्लाजुङ, लेटाङमा १–१, सु
breaking news !!! पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र यति धेरै को’रोना सं’क्रमित भेटिय !
अाजको कोरोना अपडेट, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आईतबार अद्यावधिक गरेको को'रोना भा'इरसको सं'क्रमण सम्बन्धि तथ्यांकमा काठमाडौंपछि कास्की जिल्लामा सबैभन्दा बढी सं'क्रमित फेला परेको पाइएको छ । उक्त तथ्यांक अनुसार काठमाडौं जिल्लामा आईतबार ३ सय ९५ जनामा सं'क्रमण पुष्टि भएको थियो भने कास्की जिल्लामा ३ सय १ जनामा सं'क्रमण पुष्टि भएको थियो । यो काठमाडौंपछि दोस्रो वढी सं'क्रमण फेला परेको तथ्यांक हो ।प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने आइतबार प्रदेश नम्बर १ का झापा (१५२), मोरङ (१०५) तथा सुनसरी (७६) मा ५० भन्दा बढीमा सं'क्रमण पुष्टि भएको छ ।प्रदेश १ का अन्य जिल्लाहरुमा १० भन्दा कमैमा सं'क्रमण पुष्टि भएको छ । सं'क्रमणको कम संख्याको दृष्टिकोणले प्रदेश नम्बर दुई भाग्यशाली देखिएको छ ।आईतबार यो प्रदेशमा जम्मा १४ जनामा मात्र सं'क्रमण पुष्टि भएको छ ।बागमती प्रदेशमा भने काठमाडौं ३९५, चितवन
उपत्यकामा खोलिएको कोठीमा ग्राहकलाई पासकोड ! प्रहरी छड्केमा यस्तो भेटियो !
ललितपुरमा सोमवार प्रहरीले फेला पारेको एक घटनाले प्रहरी नै अचम्मित परेको छ । भारतका को'ठीहरुमा जस्तै ललितपुरमा ५० हजार रुपैया मासिक भाडामा अपार्टमेन्ट लिएर कोठी संचालन गरेको फेला परेको हो । युवतीहरुलाई विभिन्न प्र'लोभन देखाएर त्यहाँ लगिने गरेको अनुस'न्धानवाट खुलेको छ । यति ब्यवस्थित गरिएको छ कि ग्राहकहरुलाई भित्र प्रवेश गर्न पासकोर्डको ब्यवस्था गरिएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । ललितपुरको मुख्य बजार पुल्चोकमा रहेको एक अपार्टमेन्टको चौथो तल्ला भाडामा लिएर एक महिलाले यस्तो ब्यवसाय गरेको फेला परेको हो । प्रहरीले ति महिला सहित ७ जनालाई प'क्राउ गरेको छ । सोमबार साँझ महानगरीय प्रहरी परिसरका टोलीले सो अपार्टमेन्टमा छा 'पा मा रे र संचालक गीता खड्गीसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेपछि घ'टनाको र'हस्य खुलेको हो । प्रहरीका अनुसार उक्त अपार्टमेन्ट खड्गी र उनीसँग बस्दै आएका सुरज खड्गीले भाडामा लिए
रेलमा यात्रा गर्दा प्रेम बस्यो, केही दिनमै बिवाह पनि भयो तर बिवाह लगत्तै बेहुलीले गरिन यस्तो काण्ड !
यात्राको समयमा हुने माया प्रेमबारे हामी धेरैले सुनेका छौं । तर भारत उत्तर प्रदेशको अलीगढ क्षेत्रमा एक युवकसँग जे भयो साँच्चै अचम्म छ । क्वार्सी प्र-ह-री चौकी क्षेत्रमा बस्ने एक युवकले रेलमा यात्रा गर्दा एक युवतीलाई भेटेका थिए । भेटपछि दुबै जना कुरा गर्न थाले । केही दिनमै उनीहरुको मित्रता प्रेममा परिणत भयो । त्यसपछि, दुबै जनाले आफ्नो बाँकी जीवन विवाह गरेर बिताउने निर्णय गरेका रहेछन् । विवाह गर्ने बहानामा करिब डेढ महिना घरमै एकसाथ बसेपछि ती युवती युवकको घरबाट लाखौंको गहना लिएर भागिन् । अब ति युवक केटीको खोजमा भौतारिएका छन् । बिहीबार पीडितले एसएसपीकहाँ उजुरी पनि दिएको जनाइएको छ । घटना अनुसार, ति युवक एक निजी कम्पनीमा काम गर्दछन् । डेढ महिना पहिले उनी केहि कामको लागी रेलमार्फत दिल्ली जाँदै थिए । त्यस बीचमा उनले रेलमा बसेकी एक युवतीसँग चिनजान गरेका रहेछन् । चिनजान भएको केहि
छोराको विवाह गर्न गएका बुवाले नै सम्धीनी लिएर फरा’र भएपछि
भारतको गुजरातमा भएको एक घ-ट-ना-ले त्यहाँका मानिसहरु अचम्ममा परेका छन् । भिडियो सो घ-ट-ना-ले प्रेम अ-न्धो हुन्छ भन्ने हरफलाई सत्य सावित गरेको छ । विवाहका लागि केटा पक्ष र केटी पक्ष दुवै राजीखुशी थिए तर अचम्मत तब भयो जब दुलाहाका बुबा र दुलहीकी आमा बे-प-त्ता भए । विवाहको एक हप्ता अगाडिनै दुलाहाका बुबाले सम्धीनी भगाएपछि उनीहरुको बिहे स्थगित भएको छ । बेहुलाका ४८ वर्षीय बुबा व्यापारी हुन् भने बेहुलीकी ४६ वर्षीया आमा राजनीतिक पार्टीकी कार्यकर्ता हुन् । पुस २५ गते भागेका उनीहरुले बा-ल्यकालदेखिनै छिमेकीको रुपमा एक अर्कालाई चि-नेका थिए । बुबा सुरतको कतरगाम क्षेत्रबाट हराए भने आमा गुजरातको नवसारीमा आफ्नै घरबाट हराइन् । दुवै जना बे-प-त्ता भएपति परिवारले प्र-ह-रीस-मक्ष उ-जु-री दिएको भारतीय सञ्चामाध्यमले जनाएको छ । घ-ट-ना फै-लि-एपछि एक नातेदारले उनीहरुले बा-ल्यकालदखिनै एक अर्कालाई चि-न
मलेसियामा निध’न भएकी मिठ्ठु कान्छीको श’व नेपाल ल्याईँदै, भाववि’ह्वल बन्दै यसरी गरे साथीले बिदाई
रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा ज्या-न गु-मा-एकी नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर ५ भद्रुटारकी मिठ्ठु तामाङ ९कान्छी० को श-व ल्या-उने तयारी गरिएको छ । भद्रुटारको घट्टे खोला स्थायी ठेगाना भएकी मिठ्ठुको उ-प-चारका क्रममा शनिबार बिहान नि-ध-न भ-एपछि आवश्यक कागजपत्र ढिलाइका कारण मलेसियाको एसआई कास्केट अ-स्प-ताल-मा राखिएको थियोे । आवश्यक कागजपत्र जुटे लगत्तै उनको श-व ने-पाल ल्याउन लागिएको हो । नेपाली समय अनुसार उनको श-व शनिबार बिहान ९ बजे आइपुग्नेछ ।वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा दुई वर्ष अगाडि मलेसिया पुगेकी मिठ्ठु (सन्जिता)को अन्तिम बिदाई गर्न अस्पतालसम्म उनका नेपाली तथा बिदेशी साथीहरूको घुइँचो लागेको थियो । अन्तिम बिदाइका लागि अस्पतालमा उपस्थित सबैको आँखामा आँसु भरिएको देखिन्थ्यो । मृ-त-क तामाङको सहृदयी साथी छबिलाल बोम्जनले सधैं हासिखेली हिडेका चेलीको नि-ध-न-मा आफुहरु अत्यन्त द
सपना कहिलेकाही विपनामा साकार हुन्छ । सपना कहिलेकाही संकेत लिएर आउँछ । आज हामी यो बारेमा खुलाउँदै छौ । हामीले सपनामा के देख्न सक्ने कसैको नियन्त्रणमा छैन । सपना एउटा यस्तो सत्य हो जुन सबैका लागि सामान्य छ र हरेक व्यक्तिले जीवनमा कहिलेकाहीं सपना अवश्य देख्छ । आज हामी कुरा गर्दैछौं सर्पको सपनाको बारेमा ।हो, सपनामा सर्प देखेर डराउनु सामान्य छ । यसलाई लिएर हाम्रो समाजमा थुप्रै प्रकारका विश्वासहरू छन् ।धार्मिक ग्रंथहरूमा, सर्पको सपना लिएर धेरै कुराहरू भनिएको छ। आउँनुहोस जानौं सपना सँग सर्पको के सम्बन्ध हुन्छ । १, शा'रीरिक सम्ब'न्धको जीवन र सर्प : केही अध्यनहरुमा यो पनि भनिएको छ कि तपाईले सपनामा सर्प देख्नु र तपाईको शारीरिक सम्बन्धको जीवनको निकैं नजिकैको सम्बन्ध रहेको छ । यदि सपनामा सर्प तपाईंको ओछ्यानमा देखिन्छ वा सर्पसँग जोडिएको अन्य पुरात देख्नुभयो भने त्यसको सिधै असर तपाईंको शारी
शारि’रीक सम्बन्ध राख्दा तपाईले कहिलै यस्तो ट्राई गर्नुभएको छ ?
भारतीय लेखक शिव खेराले भनेका छन, ‘बिजेताहरु फरक कुरा गर्दैनन्, उनीहरु फरक तरिकाले गर्छन् ।’ यो सबैको जीवनमा लागु हुन्छ ।यस्तै शारी'रिक सम्बन्ध कायम राख्दा पनि अनेक तरिकाहरु अपनाउन सकिन्छ । आज हामी यस विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ । यदि तपाईं बेडरूममा मात्रै हुने शारी'रिक सम्बन्धलाई लिएर बोर हुनुहुन्छ भने आज हामी तपाईंलाई केहि नयाँ कुरा बताउन गइरहेका छौँ । बेडरूममा मात्रै हुने सम्पर्क'का कारण दिक्क मानिरहनु भएको छ भने बाथरूम तपाईंका लागि उचित विकल्प हुन सक्छ । हो, तपाईंको घरमा धेरै त्यस्ता ठाउँहरु छन्, जहाँ तपाईं नयाँ तरिकाले आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ । घरको बाथरूम पनि एक त्यस्तो ठाउँ हो । सबैभन्दा राम्रो आन्नद प्राप्त गर्नको लागि बाथरूम उपयुक्त हुन्छ । यो ठाउँमा गोपनीयता पनि छ, वातावरण पनि रोमान्टिक हुन्छ । तर बाथरूममा सम्बन्ध कायम गर्दा कुनै दु'र्घटनाबाट बच्नको लागि तपाईंले सा'
प्लास्टिक सर्जरी गरेर पहिले भन्दा कम सुन्दर देखिने यि हुन बलिउड अभिनेत्रीहरु
बलिउड नायिकाहरु अभिनय मात्र नभई सुन्दरताको कारण पनि चर्चामा हुने गर्छन्। फेसन, सुन्दरता र अभिनयले गर्दा नै बलिउड अहिलेको स्थानमा पुगेको हो।बलिउडमा रहेका नायिकाहरु विश्वकै सुन्दर नायिकाहरुको सूचीमा पर्ने गर्छन्। आकर्षक आँखाले सुन्दरतालाई सिधै परिस्कृत गर्छ। फिल्म नगरीमा जे देखाउन सकियो त्यो नै बिकाउन सकिन्छ। यहाँ सुन्दरताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले त बलिउड नायिकाहरू आफूलाई अरूभन्दा सुन्दर देखाउन अनेक तौरतरिका अपनाउने गर्दछ। बलिउडका अधिकांश नायिकाहरूले प्लास्टिक सर्जरी गरेर आफूलाई बेग्लै देखाउन खोज्छन् तर प्लास्टिक सर्जरी सधैं सफल हुन्छ भन्न सकिन्न। कतिपय अवस्थामा यस्तो सर्जरी बिग्रेर नकारात्मक असर पनि पर्ने गर्दछ। आज हामी यहाँ प्लास्टिक सर्जरी फेल भएर कुरुप देखिने बलिउड नायिकाहरूको बारेमा चर्चा गर्ने छौ। श्रीदेवी आज हामीसामु छैनन् तर उनको अभिनय र नृत्यलाई
झुक्किएर पनि यस्ता कुराहरू गुगलमा सर्च नगर्नुहोस् नत्र पर्नेछ यस्तो अापत……
अचेल मानिसहरू सबै भन्दा बढी मोबाइल र ल्यापटपमा भुल्छन् । इन्टरनेटको विस्तारसँगै मानिसहरूमा यो लत बसेको हो । त्यति मात्र नभएर उनीहरू मोबाइल तथा ल्यापटपमा विभिन्न सर्च इन्जिनहरूबाट लेखेर तथा भ्वाइसमार्फत आफू अनुकूलका सामग्री सर्च गर्छन् । यसबाट उनीहरूले क्षणिक आनन्द लिए पनि पर्न सक्ने जोखिमबारे सचेत हुँदैनन् । यसरी पटक-पटक एउटै कुरा धेरै सर्च गर्ने मानिसहरूलाई अनुसन्धान एजेन्सीहरूले मनिटर गरिरहेका हुन्छन् । एक दुई पटक बेवास्ता गर्न सक्छ तर पटक–पटक सर्च गर्नाले तपाईँलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गर्न सक्छ । केही सर्च गर्न नहुने कुराहरू छन् जुन गुगलमा खोज्नुभन्दा सम्बन्धित साइट नै खोलेर हेर्न इन्टरनेट सुरक्षा विदहरुले सुझाव दिएका छन् ।जसका विषयमा जानकारी यहाँ दिइएको छ– १.चाइल्ड पो’र्न : पो’र्नलाई लिएर पछिल्लो समय निकै बहस भएको छ । भारत र नेपालमा चाइल्ड पो’र्नसँग सम्बन्धित जानकारी राख